SKD COB Recessed 3W Mini Spotlight For Display Showcase - LED ကို Down Light က, LED ပြောက်အလင်း,,LED ကို Track အလင်း,LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း,LED ကို Linear အလင်း,LED လမ်းအလင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » SKD COB Recessed 3W Mini Spotlight For Display Showcase
TRCX1001 TRCX2001 TRCX2002 DGCX1001 TXCX1001 ပုံသေ TXCX1002 ပုံသေ TXCX1003 Flexible TXCX1004 Flexible TRC1000A Surface Rail အားလုံး: TRCX1001 TRCX2001 TRCX2002 DGCX1001 TXCX1001 ပုံသေ TXCX1002 ပုံသေ TXCX1003 Flexible TXCX1004 Flexible TRC1000A Surface Rail အားလုံး
input ဗို့အား(V ကို): 220-240V ကို
အိုင်ပီခဲ့သည် Rating: IP20, IP20
ဆီမီးခွက်ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်, လူမီနီယမ်
CRI (ထွက်>): 80
ဆီမီးခွက်အလင်းအား flux(LM): 80
WB2001S: 3W က
မီးဖြေရှင်းချက်ဝန်ဆောင်မှု: အလင်းရောင်နှင့် circuitry ဒီဇိုင်း, DIALux Evo layout ကို, LitePro DLX layout ကို, Agi32 layout ကို, အော်တို CAD layout ကို, ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်မီတာ, Project မှတပ်ဆင်ခြင်း
တောက်ပထိရောက်မှု(LM / w): 100
ယာဉ်မောင်း: Lifud Driver
အာမခံချက်: skd mini spotlight
စတိုင် Install: Ressessed
1. 24အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု RHS 0086-15875705567
2. RTS ဝန်ဆောင်မှု (အတွင်းသင်္ဘော 15 ရက်ပေါင်း)
3. OEM & လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု (CAD & 3အစကတည်းကမှဆွဲ: D)
4. SKD & CKD ဝန်ဆောင်မှု (အလင်း faxtures + အဆိုပါချစ်ပ် + seperately ကားမောင်းသူ)
Foshan VOClighting ဦးဆောင်အလင်းရောင်ကရိယာများနှင့်ကျော်ပြီးပြည့်စုံအဆင်သင့်မီးခွက်မှကျူးလွန်နေတဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် 12 နှစ်ပေါင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်လမ်းကြောင်းအလင်းကိုဦးဆောင်နေကြ, နှိမ့်ချဦးဆောင်အလင်း, linear အလင်း, စသည်တို့ကို. ကျနော်တို့ OEM ပေး & ဖောက်သည်များအတွက်လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု. SKD & CKD ကိုလည်းကြိုဆိုနေသည်, သငျသညျဦးဆောင်တဲ့အိမ်ရာမဝယ်နိုင် + ဦးဆောင် chip ကို + seperately ကားမောင်းသူ. ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံကိုနိုင်ငံတိုင်းအနေနဲ့ဦးဆောင်အလင်းအိမ် VOClighting ဖွငျ့နေကြသည်ရှိစေလော့ဖြစ်ပါသည် . ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား, ဖောက်သည်ပိုကောင်းတဲ့ဝယ်ယူမှုအတှေ့အကွုံကိုရောက်စေဖို့!
တစ်ဦးက:ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Xiya စက်မှုဇုံတွင်တည်ရှိသည်, Songgang မြို့, Nanhai Dist ။, Foshan, တရုတ်နိုင်ငံ. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံကျော်ရှိပါတယ် 20 Led အလင်းရောင်နှင့်လူမီနီယံဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို, ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကြိုဆိုပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လာ!
တစ်ဦးက:သူတို့အခမဲ့ Are? ဟုတ်ကဲ့, ကျနော်တို့အခမဲ့နမူနာများကို, သင်ရုံပေးပို့အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်.
မေး:ဒါကြောင့်အလင်းအပေါ်မှာငါ့လိုဂို print ထုတ်မှ OK ကို Is?
တစ်ဦးက:ဟုတ်ကဲ့. သို့သော် MOQ 1000pcs လုပ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုဂိုလျှင်လည်းမရှိ.
တစ်ဦးက:ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် 2-3years အာမခံပူဇော်.
တစ်ဦးက:ပုံမှန်အားဖြင့်အဲဒီအကြောင်းကြာ 15-20 ရက်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်, ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ type ကို, နှင့်သင့်စိတ်ကြိုက်ဝယ်လိုအား
တစ်ဦးက:ကျနော်တို့ T / T accept, မျက်မှောက်မှာ LC, paypal နှင့် Western Union. T / T 30% သိုက်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်တင်ပို့မတိုင်မီပေးဆောင်ရပါမည်အဖြစ်.
မူပိုင် © Foshan VOClighting Co. ,,.Ltd မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. လက်တွေ့ဆန်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လိင်အရုပ်များ လက်တွေ့ဆန်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လိင်အရုပ်များ လက်တွေ့ဆန်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လိင်အရုပ်များ လက်တွေ့ဆန်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လိင်အရုပ်များ လက်တွေ့ဆန်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လိင်အရုပ်များ လက်တွေ့ဆန်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လိင်အရုပ်များ